Ihe omuma ohuru maka Apple Watch na ọdụ ụgbọ mmiri nyocha | Esi m mac
Apple bụ otu n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ na-edebanye aha ma nwee ọtụtụ patent n'ụwa, ikike ndị a apụtaghị na anyị ga-ahụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla metụtara ya. Ihe gbasara patent ọhụrụ nke weebụsaịtị appleinsider na-egosi anyị metụtara smartwatch nke ụmụ Cupertino na olile anya ma ọ bụrụ na ha ejedebe iji ha eme ihe n'ọdịnihu na smart watch.
Ikike nchọpụta a na ekpughere ụfọdụ ọrụ enwere ike ịdata n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na nche ma na-enye ndị ọrụ ohere ijikọ ngwaọrụ iji mee nyocha nke otu. Nke a n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ebe eriri na itinye na Apple Watch na Ọ nwere ike na-eweta ọhụrụ atụmatụ na usoro nke ọrụ.
Ekwuru m ugbu a na Apple na-edeba aha ọtụtụ patent ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eso ụzọ nke akara ahụ ị ga-amaworị na ọtụtụ n'ime ha na-anọgide na nke ahụ, patent. Mana na nke a ma hụ ngbanwe ma ọ bụ nkwalite nke Apple Watch, ọ ga-ekwe omume na ha nwere ike ịkwụsị iji ha. Ọ bụkwa eziokwu na ebe ọ bụ na a maara ịdị adị nke ọdụ ụgbọ mmiri nyocha a, a na-ekwu na ọ nwere ike ịbawanye ngwa ma n’oge a anyị enweghị ihe ọhụụ, mana ugbu a ejiri ikikere ndị a ekpughere anyị hụrụ na ụlọ ọrụ ahụ n’onwe ya echeela echiche banyere ya yana nke a dị mma.
Eriri nwere obere ihuenyo nke abụọ, kaadị SIM, igwefoto, GPS ma ọ bụ ọbụna ihe mmetụta iji tụọ okpomọkụ, bụ ụfọdụ nhọrọ ha nwere ike ịgbakwunye na eriri elekere ma ọ bụrụ na ha ejedebe n'ọdụ ụgbọ mmiri a. O nwekwara ike ịbụ na nke a mechara bịarute n'ụdị nche nke abụọ nke ụfọdụ mgbasa ozi na-ekwu na ọ ga-abata na njedebe nke afọ a, mana ka anyị ghara ida ugwu wee hụ ma asịrị ndị ọzọ na-apụta banyere elekere ọhụụ ma ọ bụ na Apple ga ejedebe na iji ngwa a njikọ gị na ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Ihe omuma ohuru maka Apple Watch na ọdụ ụgbọ mmiri ya
Apple Na-ekwu, Paykwụ ofgwọ nke $ 120 Nde na Patent Esemokwu na Samsung mebiri 7th Ndezigharị